ईश्वर पोखरेललाई बामदेवको जवाफः रक्षामन्त्री बन्न संसदमा जान चाहेको होइन - राजनीति - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
ईश्वर पोखरेललाई बामदेवको जवाफः रक्षामन्त्री बन्न संसदमा जान चाहेको होइन
‘नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि प्रतिनिधि सभामा लैजानु पर्छ’
नेकपाका बरिष्ठ नेता बामदेव गौतमले आफू प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभामा जान लागेको भन्ने आशंका नगर्न अनुरोध गरेका छन्।
काठमाडौँ-७ का प्रतिनिधि सभा सदस्य रामवीर मानन्धरलाई आफ्ना लागि राजिनामा दिनपनि आफूले नभनेको दावी नेता गौतमले गरेका छन्।
२२ असोजको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा गौतमका लागि काठमाडौँ-७ छाड्न आफू तयार रहेको भन्ने सांसद रामवीर मानन्धरको पत्र पेश भएको थियो।
त्यसयता गौतम एकाएक राजनीतिको चर्चामा छन्। मानन्धरलाई राजिनामा गराएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्य र त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको आरोप उनीमाथि छ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा गौतमविरुद्ध अभियान नै छेडेका छन्।
सम्बन्धित लिंक: प्रचण्ड-बामदेवविरुद्ध रक्षामन्त्री पोखरेलको प्रहार
गौतमलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनाउने कुराको समर्थन गरेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) विरुद्ध समेत पोखरेलले फेसबुक पेजमार्फत् प्रहार सुरु गरिसकेका छन्।
यसै सन्दर्भमा नेपालखबरले नेकपा नेता गौतमसँग कुराकानी गरेको छ। प्रस्तुत छ, गौतमसँगको कुराकानीः
आफू सांसद बन्न किन रामवीर मानन्धरलाई बलिको बोको बनाउन खोज्नुभएको?
प्रतिनिधि सभामा जाने चाहना मैले कत्तिपनि लुकाएको छैन। किनभने, प्रतिनिधि सभामा मेरो आवस्यकता छ। तर, रामवीर कमरेडलाई मेरा लागि तपाईंले राजिनामा दिनु पर्‍यो भनेर मैले भनेको पनि होइन।
प्रतिनिधि सभामा जाने मेरो चाहना बुझेपछि उहाँले नै ‘तपाईं जस्तो नेता प्रतिनिधि सभामा चाहिन्छ, तपाईंका लागि म छोड्न तयार छु’ भन्नुभएको हो।
राष्ट्रिय सभामा गए हुन्नथ्यो? किन प्रतिनिधि सभामा नै जान चाहनु भएको नि!
राष्ट्रिय सभामा? अहँ हुँदैन। मेरो आवस्यकता प्रतिनिधि सभामा नै छ। मेरोमात्र होइन, नारायणकाजी श्रेष्ठको आवस्यकतापनि प्रतिनिधि सभालाई खड्एिको छ। नेकपा एकताका मुख्य सूत्रधार हामी दुईजना हौँ। हाम्रो भूमिकाकै कारण एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको हो।
हाम्रा कारणले पार्टी एकता हुने, झण्डै दुई तिहाई बहुमत पनि आउने। तर एकतामा मुख्य सूत्रधार नै प्रतिनिधि सभामा नहुँदा संसद प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पार्टीपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। र, सरकारपनि प्रभावकारी बनेको छैन। त्यसैले, हाम्रो आवस्यकता प्रतिनिधि सभामा छ।
‘प्रतिनिधि सभामा नै चाहिन्छ’ भन्नुको भित्री कारण प्रधानमन्त्री बन्नका लागि होइन?
होइन। प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीले नै निरन्तरता पाउनुपर्छ। हामी प्रतिनिधि सभामा पुग्दा उहाँलाई सहयोग पुग्छ, सरकार प्रभावकारी हुन्छ। म प्रतिनिधि सभामा जाने भनेको प्रधानमन्त्रीको हात बलियो बनाउन हो।
यो पनि हेर्नुहोस्: वामदेव प्रधानमन्त्री भए रामवीर मन्त्री!
तपाईं जाँदा कसरी प्रधानमन्त्री ओलीको हात बलियो हुन्छ त?
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा शक्तिशाली विकास निर्माण प्राधिकरण बनाउने हो। म त्यसको उपाध्यक्ष हुन्छु। त्यसैमार्फत् चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन्छन्। चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकको समृद्धि कसरी गर्ने भन्ने कुराको स्पष्ट खाका छ। तर, संसद, सरकार र पार्टी प्रभावकारी नहुँदा त्यसको कार्यान्वयन हुनपनि सकेको छैन। म संसदमा जाने भनेको प्रभावकारी बनाउनका लागि हो।
अनि, नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि प्रतिनिधि सभामा लैजाने कुरा भित्रभित्रै चलेको छ र?
चल्न त चलेको छैन। तर, उहाँजस्तो नेताको पनि आवस्यकता खड्एिको छ। उहाँलाई पनि कसरी प्रतिनिधि सभामा लैजाने भन्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ। अनिमात्र, दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार प्रभावकारी र सफल हुन्छ।
तर, तपाईं प्रतिनिधि सभामा जाने कुराको पार्टीभित्रैबाट विरोध भएको छ, किन होला?
पार्टीभित्रै केही मानिस नियोजित रुपमा मेरो विरुद्धमा लागेका छन्। फेसबुकमा नानाथरि कुरा लेखेका छन्। कतिले नबुझेर विरोध गरेका होलान्। तर बुझीबुझी जसले नियोजित रुपमा प्रतिनिधि सभामा मेरो उपस्थितिको विरोध गरेका छन्, तिनीहरुलाई मेरो प्रश्न छः तपाईंहरु सरकारमा हुनुहुन्छ। तर, सरकार किन प्रभावकारी हुन सकेन? तपाईंहरु प्रतिनिधि सभामा हुनुहुन्छ। तर, संसद किन प्रभावकारी हुन सकेन? दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर नेकपा बन्यो। तर, एकतापछि पनि पार्टी किन प्रभावकारी भएन? किन कम्युनिष्ट सरकारप्रति जनता निराश हुँदै गएका छन्? किन पार्टी कार्यकर्ताहरु निराश बन्न थालेका छन्?
यत्ति प्रश्नको सकरात्मक उत्तर दिन सक्नेले संसदमा मेरो उपस्थितिको आवस्यकता देखिहाल्छ। जतिबेला बामदेव संसदमा हुन्छ, त्यतिबेला कम्युनिष्टको सरकार प्रभावकारी हुन्छ, संसदपनि प्रभावकारी हुन्छ, पार्टीपनि प्रभावकारी हुन्छ।
पार्टीका केन्द्रीय सचिवालयकै सदस्य समेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले किन तपाईं काठमाडौँ-७ बाट चुनाव लड्ने कुराको विरोध गर्नु भएको होला?
किन होला, किन होला? सुरुको बैठकमा त उहाँले विरोध गर्नुभएको थिएन। जब म डोल्पाबाट उठ्ने कुरा आयो, ईश्वर पोखरेलले नै भन्नुभएको हो, ‘बामदेवजस्तो सिनियर कमरेडलाई डोल्पा पठाउनु हुँदैन, उहाँलाई बाँकेबाट उठाउन सकिन्छ, काठमाडौँका कुनैपनि क्षेत्रबाट उठाएर भएपनि जिताउनु पर्छ र प्रतिनिधि सभामा ल्याउनु पर्छ।’
र, यो पनि: गौतमलाई काठमाडौँ-७ बाट उठाउने प्रस्तावमा पोखरेलको विरोध
उहाँले नै त्यसो भनेपछि अरुहरु क्षेत्रको खोजी हुन थालेको हो। तर, एकाएक उहाँ किन प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा विरोधमा लागिरहनु भएको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन।
उहाँसँग भेटेरै कुराकानी गर्नुभएको छैन?
किन गर्ने त्यसरी कुरा? म तपाईंहरुमार्फत् के भन्न चाहन्छु भने, ईश्वर कमरेडले सम्हाल्दै आउनु भएको रक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री हुन म प्रतिनिधि सभामा जान चाहेको होइन। म प्रतिनिधि सभामा जाँदा उहाँलाई कुनै घाटा हुँदैन। बरु प्रतिनिधि सभामा मेरो उपस्थितिले पार्टी बलियो हुन्छ, संसद प्रभावकारी हुन्छ र सरकारपनि प्रभावकारी हुन्छ।
प्रकाशित २४ असोज २०७५, बुधबार | 2018-10-10 18:48:19